Ụlọ Eziokwu: Ọ dịghị agaghachi na iwu nwoke na nwanyị
2023: Onye isi obodo Buhari ga - enyefe VP Osinbajo - Chekwas Okorie ...
Gọvanọ Masari ga-enweta gọvanọ kacha mma na ABU
Akwụkwọ odeakwụkwọ nke United States na-egosipụta nkwupụta azụmahịa nchekwube nwere ike idozi
Video: Otu esi enweta ego ka Naijiria - Emir Sanusi
Senator Udoma: Ọnụ ọgụgụ nke akụ na ụba ka na-adị ngwa ngwa
Emir Sanusi kporo ndị ozi maka nzukọ na-efu na ndị nwere ego
Omenala na-eme ka ndị agha na-arụ ọrụ agha na Lagos
Mgbe ọnwụ na-abịa na-na na kọmputa music ọganihu
'Onye kasị ochie n'ụwa' nwụrụ na Japan na 117
Davido, Tekno, Mr Real na-eme na #BBNaija finale live show
Teju Babyface, nwunye na-anabata ejima 6 afọ mgbe agbamakwụkwọ gasịrị
Arsene Wenger: Obi ike Shkodran Mustafi na Arsenal ala
Ikouwem Udoh: Flying Eagles agaghi eme ka Guinea Bissau ghari
Paul Lambert: Stoke furu efu ha 'mgbe Tony Pulis si
Jupp Heynckes: Ezumike nke Real Madrid abaghị uru
Video: President Buhari laghachiri Nigeria mgbe njem UK gasịrị
N'okwu ndị a, anyị na-ezo aka na weebụsaịtị dịka 'TAA'.
TAA nwere ikike ịkwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị na ịnweta weebụsaịtị na oge ọ bụla, na ma ọ bụ na-enweghị ọkwa ma ọ bụ nkọwa, ọ bụrụ na anyị kwenyere na ị na-emebi Okwu ahụ n'ụzọ ọ bụla.
Site na ịnweta weebụsaịtị a, ị kwenyere ka usoro ndị a na-ejikọta gị na Usoro na Usoro nke Jiri, iwu na iwu niile, ma kwenye na ị na-ahụ maka ịkwado iwu obodo ọ bụla. Ọ bụrụ na ikwenyeghị na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, a machibidoro gị iji ma ọ bụ ịnweta saịtị a. Ihe ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ a na-echebe site na ikike nwebisiinka na iwu akara ahia.
1. E nyere ikikere iji weghaara otu akwụkwọ nke ihe (ozi ma ọ bụ ngwanrọ) ruo nwa oge TAA mkpokọta maka mgbasa ozi nke onwe onye, ​​na-abụghị nke azụmahịa naanị. Nke a bụ onyinye nke ikikere, ọ bụghị inyefe aha, ma n'okpuru ikikere a, ị gaghị:
a. gbanwee ma ọ bụ detuo ihe;
b. jiri ihe ndị ahụ maka ihe ọ bụla metụtara azụmahịa, ma ọ bụ maka ngosipụta ọhaneze (azụmahịa ma ọ bụ na-abụghị nke azụmahịa);
c. gbalịa ịkọ ma ọ bụ megharịa engineer software ọ bụla dị na TAA ebe nrụọrụ weebụ;
d. wepu ihe ọ bụla nwebisiinka ma ọ bụ ọkwa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ; ma ọ bụ
e. nyefee onye ọzọ ma ọ bụ "mirror" ihe ndị ahụ na ihe nkesa ọ bụla.
2. Ikikere a ga-akwụsị kpamkpam ma ọ bụrụ na ị mebie ihe mgbochi ọ bụla ma enwere ike ịkwụsị yaTAAn'oge ọ bụla. Mgbe ị kwụsịchara ịlele ihe ndị a ma ọ bụ na nkwụsị nke ikike a, ị ga-emerụ ihe ọ bụla ebudatara na gị ma ọ bụ na kọmputa ma ọ bụ na-ebipụta.
1. Ihe naTAA A na-enye ebe nrụọrụ weebụ "dị ka".TAA emeghị ka ikike, ekwupụta ma ọ bụ gosi ya, ma wepụ ya ugbu a ma mebie nkwenye ndị ọzọ niile, gụnyere enweghị njedebe, ihe akwadoro ma ọ bụ ọnọdụ nke ahịa, ike maka otu nzube, ma ọ bụ enweghị mmebi nke akụ ọgụgụ isi ma ọ bụ mmebi iwu ọzọ. Ọzọkwa,TAAenyeghị ikike ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụ eziokwu, nsonaazụ yiri, ma ọ bụ ịdabere nke iji ihe ndị ahụ na ebe nrụọrụ weebụ Ịntanetị ma ọ bụ na-emetụta ihe ndị dị otú ahụ ma ọ bụ na saịtị ọ bụla jikọtara na saịtị a.
O nweghị ihe ga-emeTAAma ọ bụ ndị nwe ya / ọdịnaya nwere ike ịdaba maka ihe ọghọm ọ bụla (tinyere, n'enweghị njedebe, mmebi maka ọnwụ nke data ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi nkwụsị ahịa,) na-esite na iji ma ọ bụ enweghị ike iji ihe ndị ahụ TAAEbe nrụọrụ weebụ, ọbụna ma ọ bụrụ TAAma obu a TAAonye a na-enye ikike ka a gwa ya okwu ọnụ ma ọ bụ dee ederede nke nwere ike imebi ya. N'ihi na ụfọdụ ụlọikpe anaghị ekwe ka ike gwụ gị na njedebe, ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka mbibi ma ọ bụ ọdachi ndị nwere ike ịdaba, njedebe ndị a nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
5. Nyocha na Errata
Ihe ndị na-apụta TAA ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịgụnye ntanetị, nchịkọta akụkọ, ma ọ bụ ihe osise foto. TAAadịghị akwado na ihe ọ bụla nke ihe ndị dị na weebụsaịtị ya bụ ihe ziri ezi, zuru oke, ma ọ bụ ugbu a. TAA nwere ike ime mgbanwe na ihe ndị dị na ya na saịtị ọ bụla na-enweghị ọkwa. TAAọ bụghị, Otú ọ dị, mee nkwa ọ bụla iji melite ihe ndị ahụ.
TAA enyochaghị saịtị niile ejikọtara na ebe nrụọrụ weebụ Ịntanetị ọ bụghịkwa maka ọdịnaya nke ọ bụla metụtara njikọ. Ntinye nke njikọ ọ bụla adịghị egosi nkwụnye nkwado site TAAnke saịtị ahụ. Iji weebụsaịtị ọ bụla dị otú ahụ jikọtara onwe gị n'ihe ize ndụ.
7. Usoro Usoro nke Jiri Ngbanwe
TAAnwere ike ịmegharị usoro ndị a maka ebe nrụọrụ weebụ ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Site n'iji weebụsaịtị a ị na-ekwenye na ị ga-agbatị site na nsụgharị nke ugbu a nke Usoro na Usoro nke Jiri.
Ihe ọ bụla na-ekwu banyere ya TAA website ga-achịkwa iwu nke Federal Republic of Nigeria na-enweghị ihe gbasara iwu nke iwu ya.
9. amụma nzuzo
Nzuzo gị dị ezigbo mkpa nye anyị. N'ihi ya, anyị emepewo Nke a iji mee ka ị ghọta otú anyị si anakọta, iji, ekwurịta okwu na igosipụta ma jiri ozi nkeonwe. Ihe ndị a na-edepụta iwu nzuzo anyị.
:: Tupu ma ọ bụ n'oge nchịkọta ozi nkeonwe, anyị ga-achọpụta ebumnuche ndị a na-anakọta ozi.
:: Anyị ga-anakọta ma jiri ozi nkeonwe naanị maka ebumnuche nke iji mezuo nzube ndị ahụ anyị kwuru na maka atụmatụ ndị ọzọ dabara adaba, ma ọ bụrụ na anyị enweta nkwenye nke onye ọ bụla metụtara ma ọ bụ dị ka iwu chọrọ.
:: Anyị ga-ejigide ozi nkeonwe dịka ọ dị mkpa iji mezuo nzube ndị ahụ. • Anyị ga-anakọta ozi nkeonwe site na iwu kwadoro na nke ziri ezi na, ebe o kwesịrị ekwesị, na ihe ọmụma ma ọ bụ nkwenye nke onye ọ bụla metụtara.
:: Data nkeonwe kwesiri ibu ihe bara uru maka ebumnuche nke a ga - eji mee ihe, ma, ruo n'ókè o kwesiri maka ebumnuche a, kwesiri ka o zuo ezu, zuru oke, na ihe omuma.
:: Anyị ga-echedo ozi nkeonwe site na nchedo nchedo bara uru megide ọnwụ ma ọ bụ izu ohi, yana ohere n'enweghị ikike, nkwupụta, ịdeghari, iji ma ọ bụ mgbanwe.
:: Anyị ga-eme ka ndị ahịa nweta ngwa ngwa banyere iwu na omume anyị metụtara njikwa nke ozi nkeonwe.
Anyị na-agba mbọ ka anyị na-eduzi azụmahịa anyị dịka ụkpụrụ ndị a si dị iji jide n'aka na echedobe nzuzo nke ozi nkeonwe.